Sudoku 🥇 Pinda uye unakirwe kubva kuemulator.online
Sudoku mutambo unoita kunge chirahwe chenhamba. Inomutsa kufunga-kwemasvomhu kufunga uye zvine hungwaru kufunga. Pakutanga zvinogona kutaridzika kunge zvakaoma kwazvo, asi iwe uchaona kuti nekuita zvishoma, uchiziva nzira dzakakodzera, zuva rega rega zvichave nyore uye zvinonakidza.
Sudoku: maitiro ekutamba nhanho nhanho 🙂
Iwe uchawana hombe square iyo yakakamurwa kuita akati wandei mativi madiki, uye aya mativi madiki akaiswa mumapakati epakati. Nzvimbo yega yega yepakati ine mapfumbamwe madiki mukati.
Chinangwa chemutambo ndechekuzadza nzvimbo dzisina chinhu nenhamba, kuitira kuti:
Mitsara yose (chinjikira) uve nenhamba dzese kubva pa1 kusvika pa9, pasina kudzokorora chero.
Makoramu ese (vertical) uve nenhamba dzese kubva pa1 kusvika pa9, pasina kudzokorora chero.
Zvose nzvimbo dzepakati vane manhamba ese kubva pa1 kusvika pa9, vasina kudzokorora chero
Chii chinonzi Sudoku?
MuchiJapan chakanaka, zita ratinoziva tese harisi chinhu chinopfuura kurerutsa chirevo "suji wa dokushin ndi kagiru", zvinorevei "nhamba dzinofanira kunge dzakasarudzika"uye inoreva akareruka manhamba ekuvaraidza emirayiridzo yakapusa ine chinangwa chekuzadza mabhokisi ese asina chinhu kuburikidza nenhevedzano yekuverenga. Izvo zvinoda kufunga uye kufunga kwechisarudzo.
Sudoku Nhoroondo 🤓
Pasinei nezita rayo, sudoku haina kugadzirwa muJapan, zvakagadzirwa zvinonzi zvakaitwa nenyanzvi yemasvomhu yekuSwitzerland Leonhard Euler. Muzana ramakore XVIII, akasika chaakadaidza "latin nzvimbo", mutambo uyo iwo manhamba anofanira kuoneka kamwe chete mumutsara wega wega uye mukoramu imwe neimwe. 9 mitsara uye 9 makoramu yakave yakakurumbira apo yakatanga kuburitswa muUS. Muma1970.
Yaive irimo mu 1984, apo maJapan Maki Kaji akasangana nemutambo. Paakadzokera kumusha, Kaji akavandudza mutambo (Akapa manhamba ekuziva, ayo atoonekwa mubhokisi, uye akagadzira madhigirii akasiyana ekutambudzika, akaubhabhatidza ndokuuita fivha pakati pevagari vemo: nhasi Japan ine magazini anopfuura mazana matanhatu ezviuru anozivikanwa muSudoku.
Kumadokero, kubhejera kwakapenga muna 2005. Nhanho yekutanga yakatorwa mu1997, apo iyo New Zealander Wayne Gould akashanyira Japan, akadzidza nezveSudoku uye akagadzira chirongwa chemakomputa chemutambo, chakaburitswa muna 2004. Mwedzi misere yapfuura, zvisikwa zvake zvemutambo zvakatanga kuburitswa zuva nezuva nepepanhau reThe Times, iro rakateverwa nekukurumidza nemakwikwi pasi rese.
Mhando dzesudoku mukuwedzera kune yakajairwa imwe:
Diagonal: Kuti utambe, iwe unofanirwa kutevedzera mitemo yakafanana neyechinyakare Sudoku, ndiko kuti, zadzisa zvikwere zvese uchishandisa manhamba kubva pa1 kusvika pa9, pasina kudzokororwa mumitsetse yakatwasuka uye yakatwasuka. Chinhu chakatanhamara pane ino sudoku dambanemazwi ndechekuti, pamusoro pekubatanidza mitsara yakatwasuka uye yakatwasuka, iwe unofanirwa kugadzira maviri epakati diagonals achigadzira X, ine nhamba kubva pa1 kusvika pa9 uye kuti havazvidzokorore.
Izvo zvisina kufanira: ine mitemo yakafanana neyechinyakare, kunze kwekunge zvikwere zvisina kujairika.
Kakuro: Kutamba kakuro hakuna kunyanya kuoma, kunyangwe ichionekwa seyakaomarara kupfuura sudoku. Chinangwa ndechekuisa manhamba kubva pa1 kusvika pa9 nenzira yekuti arege kudzokororwa mukuteedzana kwetambo uye mukuteedzana kwekolamu, zvichidikanwa kuti huwandu hwenhamba (yakatwasuka kana yakatwasuka) hwakaenzana nenongedzo inoenderana .
Muurayi: mubatanidzwa weSudoku neKakuro. Naizvozvo, kune nzvimbo dzakatarwa uko panogona kunge pasina nhamba dzinodzokorora uye huwandu hwayo hunofanira kupa iyo yakatarwa kukosha.
Megasudoku: iwe unofanirwa kuita kuti manhamba 1 kusvika gumi nemaviri aoneke kamwe chete mumutsara wega wega, ikholamu, uye mraba. Zvakafanana neyechinyakare asi iine matatu mamwe manhamba.
Minisudoku: Izvo zvinopesana neyechinyakare nekuumbwa nenhamba diki yemakwere.
Multisudoku: Iyo inoumbwa neakawanda masudoku mapuzzle ayo pamwe chete anoita imwe.
Matipi ekugadzirisa Sudoku 🙂
Chinhu chekutanga kuita kutanga kugadzirisa Sudoku ndeche sarudza fomati yekutungamira (mutsara, chikamu kana chikwere). Kana iwe ukasasarudza imwe chete uye woedza kuita zvese panguva imwe chete, unogona kupedzisira wave kungovhiringidza nekuvhiringidza zvese, izvo zvinokutorera nguva yakareba mumutambo.
Iti, semuenzaniso, iwe wakasarudza kutanga kugadzirisa nemitsetse. Ipapo iwe unozoongorora yekutanga tambo yakatwasuka uye woona kuti ndeapi manhamba atove pairi uye ayo asipo. Zadza nzvimbo dzisina chinhu nenhamba dzisipo, kutarisisa manhamba ari mukoramu kuti ave nechokwadi chekuti haazvidzokorore.
Mushure mekugadzirisa mutsara wekutanga, enda kumutsara wechipiri uye dzokorora maitiro. Ona kuti ndeapi manhamba aunotova nawo uye ndeapi aripo kutanga kuzadza. Kana iwe usina iyo nhamba 1 pamutsara wechipiri, enda kukero yekutanga isina chinhu uye nyora 1. Ipapo tarisa pakoramu yero square. Kana iyo nhamba 1 yatovepo mukoramu iyoyo, ibvise uye nyora iyo 1 mune imwe nzvimbo. Rangarira kugara uchitarisa kana usiri kudzokorora chero nhamba yatove mudare.
Tevedza rwiyo urwu kusvika kumagumo, uye iwe unogona kuvaka yako Sudoku mutambo. Mukupedzisira, zvinowedzera kuoma kuwana nzvimbo inoenderana nenhamba pasina kuidzokorora, asi chero chinhu chiri kungoedza kushandura manhamba enzvimbo kuti zvive nyore.
Sudoku: mazano 🤓
Heano mamwe akareruka matipi uye mazano ekukubatsira iwe kugadzirisa iyo Sudoku puzzle.
Uchishandisa mamaki, iwe unogona kushandisa aya akapusa (uye kunyange akajeka) matipi:
Pane chero nguva, tarisa mutambo padyo nemaseru anongova nenhamba imwe chete mumamaki. Izvi zvinoratidza kuti panogona chete kuita mukana wesero iro.
Yakavanzwa nhamba chete
Kazhinji uchitarisisa, unogona kuwana "yakavanzwa nhamba chete"Iyi nhamba haioneke mumakisi chete. Ndiyo chete inogona kukwikwidza mumutsara, ikholamu kana 3x3 grid, inongowanikwa chete pakati peimwe nhamba. Ona mufananidzo padivi:
Mumufananidzo uyu, unogona kuona kuti nhamba 1 ne8 dzinoonekwa kamwe chete mumagidhi avo e3x3. Izvi zvinoratidza kuti vanofanirwa kuiswa munzvimbo idzodzo.
Vakaroora vasina kuroora
1. Kana chero nguva iwe ukawana iwo akaenzana manhamba chete mumaki dzeboka (mutsara, ikholamu kana gridhi), zvinoreva kuti vaviri ava vanofanirwa kuoneka mumasero maviri aya. Ona mufananidzo pazasi:
2. Mumufananidzo uyu tinoona kuti nhamba 1 ne3 dzinoonekwa dzoga mumasero maviri, saka dzinofanirwa kushandiswa mumasero iwayo. Isu hatizive chete kuti nhamba ipi inopinda musero rega rega. Zvisinei, tinoziva kuti nhamba 1 na3 hadzigoni kuoneka mune mamwe masero asina chinhu. Naizvozvo, isu tinongova nemukana mumwe chete mune yega yega.
Kune avo vasingade kushandisa zvigadzirwa, isu tinotsanangura nzira yakapusa uye inobatsira kwazvo.
Iyo mitsetse yakayambuka nzira inogona chinhu chekutanga vanhu vanodzidza pavanotamba Sudoku. Vatambi vanodzidza nekuita, nekuti zviri nyore uye zvakakosha.
Mariri, mutambi anofanira kusarudza nhamba (kazhinji ndiyo inonyanya kuwanikwa mumutambo) uye dhonza mitsara yekufungidzira pamitsetse nemakoramu mune iyo nhamba iripo.
Mumuenzaniso unotevera, tinosarudza nhamba 9. Tinowana nzvimbo dzese kwadziri uye tinodhirowa mitsara yekufungidzira pamitsetse nemakoramu kuratidza kuti nhamba 9 haigone kuiswa munzvimbo idzodzo. Kana izvi zvangoitwa, isu tinomaka emahara nzvimbo mune girini.
chitsamba : Zvakakosha kucherechedza kuti mamwe masero asina chinhu, kunyangwe asina kubviswa nemitsara yekufungidzira, haana kumakwa semahara nekuti iwo ane nhamba 9 mune imwechete 3x3 grid.
Nekutarisa kunzvimbo dzemahara, tinogona kuona kuti pakati peguru 3x3 pane imwechete nzvimbo yemahara yenhamba 9, saka tinogona kuiisa munzvimbo iyoyo.
Kana izvi zvangoitwa, tinodzokorora maitiro emitsara yekufungidzira yenhamba yatichangobva kuisa. Tarisa mhedzisiro:
Zvakare isu tinofanirwa kuongorora nzvimbo dzemahara tichitsvaga kufamba kutsva. Sezvatinogona kuona, muzasi kwepakati grid pane imwe chete yemahara nzvimbo. Ipapo tinogona kuisa nhamba 9 uye kudzokorora maitiro ari pamusoro.
Ino nguva imwe yemahara nzvimbo yakaonekwa mukona yezasi kuruboshwe, saka takaisa 9 muchinzvimbo icho uye ndokuenderera mberi nezano.
Iye zvino tava kuona kuti isu tine mana emahara nzvimbo eiyo nhamba 9, hapana chimwe chayo chakasarudzika mune 3x3 grid iri mairi. Naizvozvo, hatizive kwekuisa 9 uchishandisa zano iri wega.
Imwe nzira inogona sarudza nhamba nyowani uye dzokorora zano iri richangotsanangurwa. Iwe uchazogona kuzadza mazhinji maseru uchishandisa irori zano.
Iye zvino zvaunenge uine mamwe marongero, nakidzwa uye simbisa huropi hwako nekutamba Sudoku.🙂
Sudoku mutambo unoda imwe nguva uye kufunga, asi kana iwe uchinge waziva iyo mitemo, zvinova zvine musoro zvine musoro kutamba.
Sudoku kazhinji ine tafura ye9x9, iyo yakagadzirwa 9 grid, vane 9 maseru zvakateerana.
Pfungwa huru yemutambo ndeyekuti mutambi iwe unofanirwa kuzadza tafura nenhamba kubva pa1 kusvika pa9, pasina kudzokororwa kwenhamba pamutsetse mumwe kana gridhi.
Kana iwe ukatevera iyi yese mitemo uye uchikwanisa kuzadza tafura, saka mutambo unokundwa!
Matafura eSudoku zvakagadzirirwa kuva nemhinduro imwe chete Uye nekudaro, zvakajairika kuti isu tirege kuzviwana zvakanaka kekutanga.
Neichi chikonzero chakafanana, vatambi vazhinji vanosarudza kunyora nhamba mupenzura kuitira kuti vadzime kana vakanganisa.
Imwe pfungwa yekufunga ndeye kushandiswa kwezviratidzo. Nemhando, isu tinoreva iyo kunyora akasiyana mikana mukati mega sero. Ndokunge, kana sero richigona kuve nenhamba 3 ne9, chakanakira kuratidza (mudiki saizi) ese manhamba uye kugadzirisa iyo yasara yetafura, kudzamara iyo nhamba inoenderana nesero iyoyo yasvika.
Mune mamwe mavhezheni eSudoku, aya madiki mamaki akatove akaverengerwa mutafura, kufambisa sarudzo yavo. Mune idzi shanduro dzinoto sanganisira mamaki, pane mamwe matanho ayo achakubatsira kugadzirisa iyo dambanemazwi:
Chero pese patafura yeSudoku (ine mamaki) iwe yaunowana nhamba chete muchitokisi chimwe, ichi ndicho chiratidzo chekuti panongova nekwaniso imwechete yesero rimwe chete, kureva kuti, unofanira kufona nhamba iyoyo pakarepo muchitokisi.
Sudoku dzimwe nguva inogona kunge iri mutambo wakaomarara, asi pane zvidiki zvidiki zvekutibatsira kuona mutambo wacho. Semuenzaniso, mumitambo umo mune zvigadzirwa, dzimwe nguva tinowana izvo zvinonzi "yakavanzwa nhamba chete".
Iyi nhamba haioneke chete muchitokisi (ichiperekedzwa nedzimwe nhamba), asi ndiyo chete inogona kukwikwidza mumutsara, ikholamu kana 3x3 grid.
Ndokunge, kana iri mugridhi ye3x3, semuenzaniso, nhamba 3 inoonekwa uye isingaoneke mune chero imwe sero reiyo gridhi, zvino chiratidzo chekuti nhamba 3 ndeyaiyo imwechete sero.
Chero bedzi iwe ukawana iwo maviri maviri manhamba chete mumaki eiyo 3x3 grid, zvino zvinoreva kuti vaviri ava hazvo inofanira kunge iripo mumasero maviri aya, mubvunzo wega unomuka apa ndewekuti ndeupi uchave mune umwe neumwe.
Kana yako vhezheni yeSudoku isingauye nemamaki kana kana iwe usiri kuda kushandisa mamaki, pane imwe nzira yakapusa yekukubatsira kugona mutambo uyu.
Nzira dzakayambuka mitsara dzinoshandiswa zvakanyanya, nekuda kwekureruka kwazvo kwekushandisa. Inosanganisira Sarudza iyo nhamba inowanzoonekwa kakawanda mutafura yese uye dhonza (nepenzura kuti irege kuvhiringidzika) mitsara mumitsara nemakoramu kune iyo yakafanana nhamba inosanganiswa.
Mushure mekunge tadhonza mitsara yese, isu tinopfuurira padanho rekumaka maseru ayo asina kuvharwa mumitsetse imwechete iyoyo. Zvino, inoongororwa kuti ndeapi 3x3 grid isina nhamba 9 uye ine nzvimbo (isina kuyambuka) kuiisa.
Kana izvi zvangoitwa, sarudza imwe nhamba uye dzokorora zano rimwe chete, kusvikira masero ese azadzwa. Mukupedzisira, iwe unofanirwa kutarisa kana paine anodzokorora manhamba pamutsara mumwe chete kana gridhi. Kana pasina nhamba dzinodzokorora, mutambo wacho unohwinhwa.
Tamba nguva uye kuoma
Iko hakuna yakakwira nguva kune yega yega Sudoku pikicha, uye mutambi wega wega anogona kunakidzwa nemutambo sekureba sezvavanoda.
Mutambo weSudoku inogona kusiyana pakati pemaminitsi mashanu ne5, asi zvese zvinoenderana neruzivo rwemutambi uye padanho rekuoma kwemutambo. Zvichitaurwa zviri nyore, unowedzera mutambo, kufunga kwakanyanya kunodiwa, saka mutambo unotora nguva yakareba.
Kana zviri zvekutambudzika, inowanzojekesa mumusoro wewebsite kana magazini. Kune mitambo iri nyore yevatangi uye yakaoma kwazvo kune vane ruzivo vatambi. Kune iyo nyanzvi, iwo matanho akaomesesa anogona kuve akaomesesa, sezvo iwo matanho anotanga kutaridzika chaizvo, umo manhamba anoita kunge aratidzika. Naizvozvo, pamusoro pekufunga kwekutanga, iwe unodawo imwe nzira.
Uye saka chinyorwa chinopedzisa. Makorokoto! Iye zvino unoziva kutamba Sudoku, kana zvirinani kuti une ruzivo rwakakwana kugadzirisa aya mapuzzle!